Eight-Day Cleft Free Myanmar Initiative အစီအစဉ်ဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုစတင်ပြုလုပ်
Tuesday, August 16, 2016 - 11:46
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ Smile Asia နှင့် ‪#‎BFM‬ တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် Eight-Day Cleft Free Myanmar Initiative အစီအစဉ်၏ ပထမနေ့အဖြစ် ယနေ့ (၁၅.၈.၁၆) ရက်နေ့တွင် စတင်ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့ပါသည်။
Tuesday, August 16, 2016 - 11:29
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်လာပါက ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း (BFM) သည် ၂၀၁၆-ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့(၁၂)ခုသို့ အလှူငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀)စီဖြင့် စုစုပေါင်းကျပ် သိန်းပေါင်း(၁၂,၀၀၀) ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Smile Asia နှင့် ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း (BFM) ပူးပေါင်း၍ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ် ၁၇၀ ဦးခန့်ကို အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသ
Tuesday, August 16, 2016 - 10:38
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ Smile Asia နှင့် ကမ္ဘောဇ အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် Eight-Day Cleft Free Myanmar Initiative စတင်သည့် အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး Training Center တွင် သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတွင် အသုံးပြုရန် BFM မှ ငွေကျပ်သိန်းတစ်ထောင်လှူဒါန်း
Wednesday, July 27, 2016 - 15:52
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်လာပါက ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် BFM မှ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများအနေဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် ပြင်ဆင်နိုင်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်နိုင်ရေးအတွက် အလှူငွေများကို ပေးအပ်လှူဒါန်းလျက်ရှိပါသည်။
တောင်ကြီးအသင်းမှ ချီးမြှင့်သော အမျိုးသမီးထူးချွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဂုဏ်ပြုဆုကို BFM ဥက္ကဌ ဒေါ်နန်းလိုင်းခမ်း လက်ခံရရှိ
Wednesday, July 27, 2016 - 15:42
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးအသင်းမှ နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ၊ ပညာရည် ချွန်ဆုပေးပွဲနှင့် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၄)ရက်နေ့က ရန်ကုန် မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘောဇသာသနာ့ဗိမာန်တွင် ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို့ အသက်(၇၅)နှစ် အထက် ကန်တော့ခံသက်ကြီးဘိုးဘွားများ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ တွင် ဂုဏ်ထူးဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ဲကြသော အသင်းဝင်သားသမီးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည် တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
သက်ကြီးလူရွှင်တော်ကြီးများအား ကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက် BFMသကျကွီးလူရှှငျတောျကွီးမြားအား ကူညီထောကျပံ့ရေးအတှကျ BFM မှ ငှကေပြျသိနျး(၁၀၀) လှူဒါနျး မှ ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀) လှူဒါန်း
Wednesday, July 27, 2016 - 15:31
လူရွှင်တော်အသင်း (ရန်ကုန်) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် သက်ကြီးလူရွှင်တော်ကြီးများအား ကူညီထောက်ပံ့ရေး ရန်ပုံငွေကပွဲကို ၂၄.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့ညက ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းမှ Main Sponsor အဖြစ် ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀) ပံ့ပိုး လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Second Knowledge Sharing Session for Autism held in Mandalay
Wednesday, July 27, 2016 - 15:22
The Brighter Future Myanmar Foundation (BFM) and Myanmar Autism Association joinly organized the second knowledge sharing session for Autism on 23rd July at Hotel Mandalay in Mandalay city.
တံတားဦးမြို့နယ်မှ မီးဘေးသင့်ပြည်သူများကို BFM မှသွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့
Wednesday, July 27, 2016 - 14:45
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ တံတားဦးမြို့နယ်၊ ပန်းယျကျေးရွာတွင် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်၌ တပ်ဆင်ထားသော ဆိုလာပြားမှ ဝါယာရှော့ဖြစ်ကာ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
Wednesday, June 15, 2016 - 16:45
In honor of World Blood Donor Day on June 14th 2016, 1700 employees from KBZ Branches in Yangon, Mandalay, Naypyitaw, Taunngyi, Mawla Myaing, Dawae, Sitwae, Magwe, Pha Ann, Pathein and Bago donated blood.
Convocation Hall at the Buddhist University in Taunggyi
Wednesday, June 15, 2016 - 16:41
Convocation Hall at the Buddhist University in Taunggyi, Shan State donated by the KBZ Brighter Future Myanmar Foundation